Falanqeyn..Muuqaalkii Abubakr Al-Baqdaadi | Xaqiiqonews
Falanqeyn..Muuqaalkii Abubakr Al-Baqdaadi
Muuqaal Dhawaan la baahiyey ayaa waxaa ka soo muuqday hogaamiyaha kooxd Dowladda Islaamiga, oo ,muddooyinkii ugu dambeeyey la kulantay guuldarrooyin farabadan.
Si kastaba ha ku dhacdee, hogaamiyaha isku magacaabay “Khaliifka Muslimiinta” dhawaan ayaa laga dhax arkay muuqaal ay baahisay mu’sasadada al-Furqaan.
Muuqaalka cusub ayaa soo baxay xilli su’aalo badan la iska weydiinayey badqabka hogaamiyaha,waana 5 sano ka dib markii ugu horeysay ee Baqdaadi lagu arko muuqaal cod ah.
Sida ay qortay majaladda af-isbaanishka ku hadasha ee Corriere della Sera, Baqdaadi ayaa isku soo sawiray Qoray Ak47 Ruushiyaan ah, taasi oo dadka soo xasuusisay muuqaalada hogaamiyahii geeriyooday ee Al-Qaacidda Usama bin Laden.
Muuqaalka Baqdaadi ayaa waxaa la sawirnaa seddec rag oo wajiyadooda la qariyeye, hase yeeshee falanqeeyaasha ayaa ku doodaya in ragga sawirnaa ay xirnaayeen khamiiska Al-Shamaq ee hiddaha iyo dhaqanka u ah dadyowga dagan bariga Suuriya iyo kuwa dagan galbeedka Ciraaq.
Axmed Shariifi oo ah khabiir wax ka qora arimaha kooxaha Islaamiyiinta, waxa uu leeyahay “Baqdaadi waxa uu ka hadlay halganka ka dhaxeeya Kirishtaanka iyo Islaamka, taasi oo muujineysa sida wali kooxdan ay uga dhiganyihiin afkaarta xagjirnimada ee ku dhisan halganka ka dhaxeeya islaamka iyo diimaha kale”.
Waxaa uu intaasi ku daray “Baqdaadi ma dooneynin oo kaliya in uu dadka u caddeeyo in uu noolyahay sidoo kale waxaa uu doonaayey in uu adkeeyo in kaalintiisii hogaamineed ee ururka ay wali taagantahay”